Archive du 20190702
Onitiana Realy Nampitandrina an-dRajoelina amin’ireo mpisolelaka
Hita hoe manana finiavana hanao zavatra ny filoha Andry Rajoelina ary tokony hahavita asa saingy misy teboka vitsivitsy tokony hotandremany, hoy Rtoa Onitiana Realy halina tao amin’ny fahitalavitra Real TV, izay izy moa no lehibeny.
Voka-pifidianana solombavambahoaka Fitsapana manaraka indray ho an`ny HCC
Ho fantatra anio talata 02 jolay amin`ny 4 ora tolakandro ireo depiote 151 hiakatra ny lapan`i Tsimbazaza hisolovava ny vahoaka mandritra ny dimy taona manaraka indray.
Barean’i Madagasikara Atao fitaovana politika…
Reharehantsika Malagasy ny Barean’i Madagasikara, izay tena namiratra ao anatin’ny CAN 2019 amin’izao fotoana izao. Tsara ary mendri-piderana ny fanohanana ataon’ny sokajin’olona rehetra na mpanao politika na olom-pirenena.
Fifandimbiasam-pahefana tao anatin’ny 5 taona Feno ratra sy faty olona
Tao anatin’ny fianianan’ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, teo Mahamasina ny 25 janoary 2014 no nanomboka ny fisiana faty olona maro sy ratra toy izay niseho teo amin’ity kianjabe ity indray ny 26 jona teo.
Tafiakatra iny aloha ny ekipantsika Barea Naharesy mazava be an-dry zareo Nigeria Faly avokoa ny Malagasy marobe Nihorakoraka avokoa nidina an-dalambe.
Ady amin`ny kolikoly Nitombo ny tetibolan`ny PAC
“Tsy nahena araka ny fanamambarana nataon`ny fiarahamonim-pirenena azy fa nampitomboina ny tetibolan`ireo rafitra iadiana amin`ny kolikoly”, hoy ny minisitry ny fitsarana, Jean Jacques Randrianasolo.
Lalàna mikasika ny fananana azo tsy ara-dalàna Hihatra tokoa ve sa an-taratasy fotsiny ?
Misaotra an’Andriamanitra aho, hoy ny mpisolovava Willy Razafinjatovo na Maitre Olala, fa ela no niadiako mikasika ny mba hisian’izany lalàna momba ny fananana azo tamin’ny fomba tsy ara-dalàna izany ary tanteraka ihany izy ity.
Hafampana eny Anosy Hotsaraina anio ireo Miaramila 27
Hiakatra fitsarana anio talata 02 jolay 2019 ny raharaha fatin’olona telolahy hita nifatotra tao amin’ny reniranon’i Onive teny Ampitatafika, distrikan’Antanifotsy ny 31 mey teo.
Oniversite Toamasina Napetraka tamin`ny fomba ofisialy ny filoha
Ambohipihaonan`ireo avara-pianarana maro lafy sy ireo olom-panjakana isan-tsokajiny notarihin`ny minisitry ny fampianarana ambony Félicitée Rejo-Fienena tao amin`ny oniversite Barikadimy Toamasina ny faran`ny herinandro lasa teo.
Boriborintany faha-4 Ankizy miisa 80 no vita hasoavana faobe maimaimpoana
Notontosaina ny sabotsy teo indray ny didimpoitra faobe tao anivon’ny Boriborintany fahefatra, kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), anampiana ireo fianakaviana sahirana manana zazalahy kely hoforaina .
Trafika eto an-drenivohitra 14 tapitrisa ariary ny vidin’ny basy teny Tanjombato
Tafiditra tao anaty vela-pandriky ny haraton’ny mpitandro ny filaminana teny Tanjombato ny basy “PA MAB” iray niaraka tamin’ny bala miisa 13 saika hamidy 14.000.00Ariary.